Al-Shabaab oo dhaaftay Daacish iyo Boko Xaram: Tirada midkiiba uu dilay sanadkii tagay oo la shaaciyey - Hablaha Media Network
Al-Shabaab oo dhaaftay Daacish iyo Boko Xaram: Tirada midkiiba uu dilay sanadkii tagay oo la shaaciyey
HMN:- Ururka Al-Shabaab ee xiriirka la leh Al-qaacidda ayey ku qaadatay seddex sano inay hoggaanka dilalka ugu badan kala wareegto ururka Islaamiga ah ee ka jiro Nigeria Boko Haram taasoo markii hore aheyd kooxda geysatay dilalka ugu badan ee ka dhaco Africa tan iyo sanadkii 2010.
Warbixinadii ugu dambeeyey ee lasoo saaray ayaa tilmaamayo isbadal weyn oo ku dhacay dilalka ay geystaan labadaan koox, waxaana lasoo saaray kooxaha ugu dilka badan Africa (Al-Shabaa, Boko Haram iyo Daacish).
Ururka Al-Shabaab ayaa sanadkii 2016 mas’uul ka ahaa dilka 4,281, halka Ururka agagixisada ee Boko Haram uu geystay dil gaarayo 3,499 isla sanadkaas 2016 taasoo muujineyso in Al-Shabaab ay xagga dilalka ka sare martay Boko Haram sida ay xog kusoo aruurisay Armed Conflict Location & Event Data Project ( ACLED ) oo kaashanayo Africa Center for Strategic Studies oo xulafo la ah waaxda Gaashaandhigga Mareykanka.
Waa markii ugu horeysay oo ay Al-Shabaab ka kor marto Boko Haram xagga dilka tan iyo sanadkii 2012, sidoo kalana waxay Al-Shabaab ka sare martay xagga dilalka ururka Islamic State militant group (ISIS) taasoo Africa ka geystay dilal gaarayo ilaa 2,350 sanadkii 2016.
Boko Haram ayaa ah ururka Africa ka geystay dilalka ugu badan guud ahaan waxayna ka sareeyaan Al-Shabaab iyo Daacish.
Boko Haram ayaa dishay guud ahaan 29,000 qof tan iyo sanadkii 2010 Kaliya Qaaradda African, waxayna ka badan yihiin 11,000 kun oo qof inta ay Al-Shabaab dishay tan iyo xilligaas.
Arrintaan ayaa muujineyso in Boko Haram ay tahay koox aad ugu dheereyso xagga dilalka laga geysto qaaradda Africa, waxayna saldhigeeda ugu weyn ku leedahay dalka Nigeria oo ay dhibaato badan ka geysteen.
Boko Haram ayaa dilalka ugu badan ka geystay Woqoyi barri ee Nigeria iyo aagga Lake Chad waxayna inta badan caan ku yihiin inay bombooyinka kusoo xiraan carruurta sidoo kalana ay afduubtaan gabdhaha yar yar.